Muxuu daaranyahay dagaalka dhexmaray daalibaan? | Berberanews.com
Home WARARKA Muxuu daaranyahay dagaalka dhexmaray daalibaan?
Ku-simaha ra’iisul wasaare ku-xigeenka Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar, ayaa ka soo muuqday cajalad fiidiyoow ah si uu u beeniyo wararka sheegaya inuu ku dhaawacmay isku dhac dhex maray isaga iyo koox ka soo horjeeda ee Taliban.
Aasaasaha Taalibaan ayaan muddo dhowr maalmood ah la arag.
Waxaa jiray warar sheegaya inuu khilaaf soo kala dhex galay hoggaamiyeyaasha Taliban, oo uu ku lug lahaa Baradar iyo koox iska soo horjeedda oo daacad u ah shabakadda awoodda badan ee Haqqani.
Muuqaalka gaaban – oo lagu baahiyay Twitter-ka xafiiska siyaasadda Taliban ee Doxa – ayaa muujinayay isaga oo fadhiya kursi u dhow wareyaha telefishinka dowladda, oo sida muuqata ka akhrinaya warqad.
“Waa Alle mahadiis ah in aan leenahay xiriir wanaagsan oo ah is xushmeyn. Xiriirkeena xitaa waa ka wanaagsan yahay midka ka dhexeeya qoysaska,” ayuu yidhi.
Muuqaalka cusub ayaa yimid ka dib markii saraakiil sare oo ka tirsan Taalibaan ay BBC -da u sheegeen in taageerayaasha Mullah Baradar ay la dagaallameen garab daacad u ah Khalil ur-Rahman Haqqani – oo ah wasiirka qaxootiga, isla markaana ah shaqsi caan ka ah shabakadda Haqqani.
Golahooda cusub ee ku meel gaadhka ah gabi ahaanba waa rag waxayna ka kooban yihiin saraakiil sarsare oo Daalibaan ah, kuwaas oo qaarkood caan ku yihiin weeraradii lagu qaaday ciidamada Mareykanka labaatankii sano ee la soo dhaafay.Xigasho Bbc Somali
Previous articleMuuse Biixi iyo Maxamed Kaahin maxay ka yidhaahdeen shakhsiyadii Marxuum Suldan Cumar
Next articleSomalia: dagaal u dhexeeya ciidamada Milateriga iyo Booliska oo socda